87 maroodi oo lagu laayay kayn ku taala dalka Botswana | Biyoguurenews.com
Home Wararka 87 maroodi oo lagu laayay kayn ku taala dalka Botswana
87 maroodi oo lagu laayay kayn ku taala dalka Botswana
Raqda wax ku dhow 90 maroodi ayaa laga heley kayn caan ah oo ku taala dalka Botswana sida ay sheegayaan dadka u ololeeya arrimaha deegaanka.
Ururka Maroodiyada aan Xudduuda Lahayn ayaa sheegay in tirada xayawaanka la laayay ay tahay tii ugu badneyd Afrika oo halmar dhacda.
Laynta maroodigan tirada badan ayaa ka dambeysay kadib markii hubka laga dhigay ciidankii la dagaalanka ugaadhsiga ee Botswana.
Dalka Botswana ayaa haysata tirada ugu badan ee maroodi ah, balse ugaadhsadata ayaa si xad dhaaf ah ugu xadgudbaya dalkaas.
“Aad ayaan uga argagaxay xadka ugaadhsiga inta uu gaarsiisanyahay, waana tii ugu badnayd Afrika oo dhan” ayuu yiri Dr Mike Chase oo ka tirsan ururka Maroodiyada aan xudduuda lahayn.Tirakoob la sameeyay ayaa lagu sheegay in saddex dalool mid ka mid ah maroodiga Afrika la laayay, iyada oo dalka Tanzania boqolkiiba 60% maroodigii ku noolaa la laayay muddi 5 sano gudahood ah.
Botswana ayaa caan ku ah sharciyada iyo tallaabooyinka adag ee ay ka qaado ugaadhsatada, taasna waxa ay keentay in ay ka badbaado xayawaanka badan ee la laayo.
130,000 kun oo Maroodiyo ah ayaa ku nool dalkani, waxaana lagu sheegay in ay tahay dalkii ugu dambeeyay ee ay ku bad galaan xayawaanka sii dabar go’aya.
Dowladda ayaa hubkii ka dhigtay ciidankii la dagaalanka ugaadhsiga bil uu kadib markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Mokgweetsi Masisi. Afhayeen u hadlay madaxweynaha ayaanan sharixin sababta hubka looga qaaday askarta wakaaladda duur-joogta.
Qiimeynta hadda lagu sameeyay duur-joogta ayaa hadda maraysa kala bar, waxaana dhiman dhul badan oo weli aanan la sahmin, sidaas darteedna waxaa laga baqayaa in xayawaanka la laayay ay intan aad uga badanyihiin.
Previous articleDukaanle ka ganacsada kalluunka oo ku sugan dalka Kuwait ayaa dukaankiisa la xirey kadib markii la faafiyay sawirro muujinaya indho baliil ah oo uu u xiray kalluunkii uu iibinayay si uu uga dhigo in uu yahay mid cosob ah ama markaas la keenay.
Next articleGo,aankii Madaxwayne Biixi ee Diiwaangalinta hantida Qaranka oo Saamayn wayn ku Yeeshay Masuuliyiintii Xukuumadii Hore ee Siilaanyo